FRCRP / SAA (C-Reactive Protein / Serum Amyloid A) Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
[email inodzivirirwa] Iyo FRCRP / SAA (C-Reactive Protein / Serum Amyloid A) Reagent Kit inoitirwa kuwongorora huwandu hweC-inoshanda mapuroteni uye Serum Amyloid A muvanhu serum. Kliniki, izvo zviviri zvinongedzo zvinonyanya kushandiswa seanopisa mamaki.
CRP ipuroteni (yakaoma-chikamu) muropa iyo inomuka nekukurumidza kana hutachiona hutachiona kana kana zvinyama zvakuvadzwa. Inoita kuti ishande uye inowedzera phagocyte kumedza, ichibvisa inopinda pathogenic microorganism uye histiocyte iyo yakanganisika, necrotic kana apoptotic. Ichishandiswa sechiratidzo chakakomba cheacute-phase mhinduro, iyo CRP mwero muropa inosangana nekukurumidza uye kwakakosha kuwedzera uye inogona kusvika kusvika 2000 nguva zvakajairika mune mamiriro eakanyanya myocardial infarction, ronda, hutachiona, kuzvimba, kuvhiya uye tumarara-inopinda . Kuyerwa kweCRP kunobatsira kuteedzera nzira yechirwere kana ichibatanidzwa nekiriniki nhoroondo.
Zvakafanana neCRP, SAA inoshandiswa kuongorora maitiro eacute phase mhinduro. SAA chiratidzo chinonzwisisika chekuti iko kusungirirwa kunotanga kukwira mukati meanenge 8h mushure mekupindura kwekuzvimba. Zvinotora nguva shoma kuti SAA iverenge kusimudza uye kupfuura mareferenzi renji pane CRP. Kune vanhu vakajairika, iwo muganho wepamusoro wenguva yekutaura inguva gumi dzehuwandu hwepakati muCRP, ingori nguva shanu muSAA. Kukwidziridzwa kweSAA kwakajairika kupfuura kukwidziridzwa kweCRP kwehutachiona hushoma, senge hutachiona hutachiona. Zvezvirwere zvinotapukira, kukwira kweSAA kukosha kwakakura kupfuura kukwira kweCRP kukosha, zvinoreva kuti kuonekwa kweSAA kunobatsira zvakanyanya mukuziva zvakaenzana "zvakajairika" uye zvishoma mhinduro dzechikamu. Kazhinji, dzakatenderedza 10/5 yevanorwara nechando vanoona kukwira muSAA, nepo pasingasvike 2/3 yavo vanoona kukwira kweCRP.
Yakakura yekuyera renji
Liquid phase reaction system, uchishandisa latex immunoturbidimetry methodology inotungamira kune chaicho mhedzisiro
Mhedzisiro inowanikwa mune 9 maminetsi
Inodhura-inoshanda pasina zvimwe zvekushandisa & hapana yezuva nezuva yekuchengetedza inodiwa